ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားသော နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအား ဝင်ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Laguna ပြည်နယ်၊ Enchanted Kingdom အပန်းဖြေဥယျာဉ်အတွင်း၌ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသည့် ခရီးသည်များမှ အပျော်စီးယာဉ်တစ်ခုအား ပျော်ရွှင်စွာစီးနင်းနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မနီလာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် “အစိမ်းရောင်” သို့မဟုတ် COVID-19 အန္တရာယ်နည်းပါးသော အခြားသော နိုင်ငံနှင့် ဒေသ ၄၀ ကျော်မှ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားသော နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအား မကြာမီ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းဝန် Karlo Nograles က နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် ရက်အတိအကျအပါအဝင် လမ်းညွှန်ချက်များကို အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း Nograles က ပြောကြားခဲ့သည်။
လုံခြုံသောနေရာများမှ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက် “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ်းခြေများကိုဖွင့်ရန်” ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိုင်ငံ၏ “စီးပွားရေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်” ဟု Nograles က အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် စီးပွားရေးကို သိသိသာသာ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး နိုင်ငံခြားခရီးသွားများကို ခွင့်ပြုခြင်းသည် နိုင်ငံအား ကပ်ရောဂါဘေးမှ ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Nograles မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၁,၄၈၅ ဦး ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၂,၈၂၃,၂၁၀ ဦးအထိ ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါကြောင့် လူ ၂၇၇ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရာ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူဦးရေ ၄၆,၆၉၈ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
လူဦးရေ သန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်ရှိသော ဖိလစ်နိုင်ငံ၌ စုစုပေါင်း ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားသည့် အချိန်မှစ၍ လူဦးရေ ၂၂ သန်းကျော်အား ရောဂါစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MANILA, Nov. 19 (Xinhua) — The Philippines will soon allow the entry of fully-vaccinated foreign tourists from China and over 40 other “green” or COVID-19 low-risk countries and regions, Cabinet Secretary Karlo Nograles said on Friday.
Nograles, co-chair of the interagency coronavirus task force, said the government is still finalizing the guidelines, including the exact date for the reopening.
Nograles toldavirtual press conference that the decision to “open up our shores” to foreign tourists from safe places is part of the country’s “calibrated reopening of the economy.”
Nograles said the tourism sector significantly contributes to the economy, and allowing foreign tourists will help the country rebound from the pandemic.
The Philippines’ Department of Health reported 1,485 new COVID-19 infections on Friday, bringing the number of confirmed cases in the Southeast Asian country to 2,823,210.
The health department also reported that 277 more people died from COVID-19 complications, bringing the country’s death toll to 46,698.
The Philippines, which has around 110 million population, has tested more than 22 million people since the pandemic. Enditem